Sawirro: Oradyahan caan ah oo u wareegay kubadda cagta kuna biiray koox awood leh - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Oradyahan caan ah oo u wareegay kubadda cagta kuna biiray koox...
Sawirro: Oradyahan caan ah oo u wareegay kubadda cagta kuna biiray koox awood leh
Usain Bolt (31-jir) ayaa maanta ku biiray kooxda kubadda cagta ee jarmalka ah Borussia Dortmund kadib markii uu kasoo wareegay oo uu ka soo xiiso-beelay orodka oo uu ku caan baxay.
Bolt ayaa kaalimaha koowaad ka galay orodka 100- iyo 200 mitir, waxaana uu ka haystaa biladda adduunka. Orodyahankan oo marnaba qarin in uu mar uun u ciyaari doono koox caan ah kubadda, ayaa riyadiisii run ka dhigay waxaana wadahadal u socday in mudo ah kooxda Borussia Dortmund kusoo dhamaaday in uu ka mid noqdo kooxdaasi.
“Waxaan doonayaa in aan ka mid noqdo 50-ka ciyaaryahan ee adduunka ugu caansan dhanka banooniga, waxaana rabaa in aan noqdo weeraryahan dhaliya 20 gool hal xilli-ciyaareed” ayuu yiri Usain Bolt. Garoonka uu ku tababaranayay ayaa waxaa soo buux-dhaafiyay taageerayaal aad u farabadan, waxaana uu siiyay qaarkood saxiixyo.